दोहोरिएको झुठो कुरा - साउथ एशिया चेक
दोहोरिएको झुठो कुरा
साउथ एशिया चेक / बिहीबार, साउन २३, २०७६
गत साउन २१ गते प्राइम टाइम्स् टेलिभिजनबाट प्रसार भएको “जनता जान्न चाहन्छन्” कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने, ‘हामीले जाडोमा कुनै पनि मान्छे, नेपालीलाई मर्न दिइनेछैन भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो । त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्यौ’। गत वर्ष कोही पनि कठ्यांग्रिएर मर्ने स्थिति बनेन । तराईमा शीतलहरका कारणले होस् वा अन्य कारणले, त्यो स्थिति बनेन ।”
गएको माघमा एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही कुरा भनेका थिए ।
साउथ एसिया चेकले फागुन ३ मा यस कुराको तथ्य जाँच गरी रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । तराईमा जाडोका कारण कसैको पनि ज्यान नजानुको जस प्रधानमन्त्री आफूले लिए पनि हामीले गरेको तथ्य जाँचमा यसपटक तराईमा शीतलहर नै नपरेको देखिएको छ । त्यो रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन गरेकाले यसपटक तराईमा शीतलहरका कारण कसैले ज्यान गुमाएनन् भन्ने डा. राजन भट्टराई दावी गलत हो ।